Sidee inuu ka soo kabsado Music Khasaaray ka Lugood on PC / Mac
Talaabooyinka inuu ka soo kabsado Khasaaray Lugood Music
> Resource > Lugood > Talaabooyinka inuu ka soo kabsado Khasaaray Lugood Music
"Waxaan leeyahay qaar ka mid ah heesaha lumay Lugood Library? Ma suroobi karaa waddo inuu ka soo kabsado badiyay music Lugood? Waxaan baadhay internet-ka, waxa ay ii sheegeen in ay bedeli ugu dambeeyay Lugood Library.itl la mid duug ah. Dhab ahaantii, waxaan kaliya burburiyay qaar ka mid ah heesaha cusub iyo iyagoo aad ku dartid Lugood Library. Anigu ma aan samayn karo in. fikrad kasta? "
Si aad u soo kabsado lumay music Lugood, badalay ugu dambeeyay Lugood file, Lugood Library.itl la file ah oo gaboobay waa fikrad wanaagsan. Si kastaba ha ahaatee, by this qabanayaan, waxaad waayi doonaa playlists dhawaan ku daray, heeso, iyo videos. Haddii files ula jeeddaan badan oo aad si, waa in aad codsato workaround kale. In socda, waxaan jeclaan lahaa in aad la wadaagto sida inuu ka soo kabsado music lumay ka Lugood si fudud. Raac tallaabooyinka hoose si aad u soo kabsado music lumay ee Lugood.
Wondershare TunesGo waa app ah in aan u socoto si ay u isticmaalaan inay ka soo kabsadaan badiyay music Lugood. Sida aad arki labada TunesGo (Windows) iyo TunesGo (Mac) la soo bixi karaa halkan. Waa in aad dooratid version saxda ah ee computer. In socda, waxaan soo qaadan doonaa sida inuu ka soo kabsado music lumay ka Lugood on Windows PC sida tusaale.
Tallaabada 2. Connect macruufka qalab la PC
Fadlan xirmaan mid ka mid ah qalab macruufka, ku odhan, iPhone, iPad, ama iPhone aad PC. Fadlan hubi qalab macruufka ah waxa aad ku isticmaalayso ku jira heeso aad ku waayey Lugood. Wondershare TunesGo (Windows) taageertaa iPhone, iPod, iPad. Eeg qalabka taageeray . Burcad TunesGo. Waxay qaadan doontaa TunesGo xoogaa ilbiriqsiyo ah in la aqoonsado qalab macruufka iyo waxa ay muujiyaan in uusan xirmin suuqa ugu weyn.
Tallaabada 3. Ladnaansho music lumay on Lugood
Tan iyo Lugood aad badiyay music waa in aad qalab macruufka ah. Hadda waxaad isticmaali kartaa TunesGo in ay dib u gudbiyaan, kuwaas oo heeso guuldarro Lugood. Riix Media dhanka bidix inay soo qaadaan suuqa kala warbaahinta. By default, tab ugu horeysay ee suuqa kala Media waxaa music. Dhammaan heeso ku saabsan qalabka macruufka waxaa lagu soo bandhigaa halkan. Dooro kuwa la doonayo oo guji saddexagalka hoos "Dhoofinta" menu. Laga soo bilaabo liiska hoos-hoos u, dooro "Dhoofinta in Lugood Library". Waxa kaliya ee qaadatay dhawr ilbiriqsi dhammayn geeddi-socodka soo kabashada Lugood badiyay music.
Tani waa sida inuu ka soo kabsado music lumay on Lugood. Marka aad music synced ka Lugood in qalab macruufka ah, waxaad isticmaali kartaa TunesGo Wondershare in ay dib ugu Lugood iyo computer iyaga u hesho. Tani waa hab looga cabsado inuu ka soo kabsado Lugood badiyay music.
Top iPod in Lugood Transfer Tools in aad nuqulka Media Faylal ay si Lugood
Talooyinka beddelashada Music ka Flash Drive in Lugood
Sidee si ay u gudbiyaan playlist ka iPhone in Lugood ee PC